युगसम्बाद साप्ताहिक - स्वतन्त्र मधेश गबठन्धन बन्यो ‘जनमत पार्टी’ यूएनपिओको सदस्यता के ?
Saturday, 01.18.2020, 07:51pm (GMT+5.5) Home Contact
स्वतन्त्र मधेश गबठन्धन बन्यो ‘जनमत पार्टी’ यूएनपिओको सदस्यता के ?
Monday, 03.18.2019, 04:46pm (GMT+5.5)
काठमाडौं । सरकारसंग ११ बुँदे सहमति गरी नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको गतिविधि र यसको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तत छ । सहमतिपछि उनले दिएका अभिव्यक्ति र उनका कार्यकर्ताको व्यवहारले यस्तो स्थिति जन्माएको हो । हुन पनि मधेश अलग देश बनाउने अभियानमा लागेका सिके राउतले नेपालको अखण्ड भूभाग मधेश (तराई) कुनै समय स्वतन्त्र देश थियो र नेपालले सैनिक बलमार्फत यसमाथि कब्जा जमाएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार गरिरहेका छन् ।
सोमबार लाहानमा सम्पन्न स्वतन्त्र मधेश राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले जनमत पार्टी गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । ३५ सदस्यीय केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिमा डा. सिके राउत राष्ट्रिय अध्यक्ष रहेका छन् । अब गठबन्धनले पृथकतावादी समुहहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको सदस्यता लिएको छ । अब उनले त्यो संगठनबाट आफ्नो संस्थाको नाम हटाउँछ कि हटाउँदैन हेर्न बाँकी छ ।
त्यसो त आइतबार सुरु भएको बैठक राष्ट्रिय गानबाट सुरु भएको थियो र सहभागीहरुलाई बैठकमा प्रवेश गर्न नेपाली नागरिकता देखाउनुपरेको थियो । यी दुई कुराले राउत परिवर्तन भएको हो भन्ने देखाउँछ तापनि अरु धेरै र महत्वपूर्ण निर्णय कसरी हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन विश्वमा स्वतन्त्रताको संघर्ष गरिरहेका भनिएका समुदाय, क्षेत्रका संस्थाहरुको संगठन अनरिप्रिजेन्टेड नेशन्स एण्ड पिपल अर्गनाइजेशन (युएनपिओ) को सदस्य रहेको छ । युएनपिओले अरु मुलुकबाट अलग हुन चाहिरहेका, स्वायत्त र आत्मनिर्णयको अधिकार खोजिरहेकाहरु (आफूलाई स्वतन्त्र देश भन्ने तर देश नभैसकेको) लाई सदस्यता दिएको छ र यसमा ताइवान, तिब्बत पनि सामेल छ । त्यस्तै पश्चिम बलुचिस्थान, इरानी कुर्दिस्थान लगायतका ४३ देशका संगठनहरु सदस्य छन् । यो संगठनमा आबद्ध भएका पूर्व सदस्यहरुमध्ये कतिपयले अलग देशको मान्यता पाइसकेका छन् ।
यो संगठनले मधेशको स्वतन्त्रता र मधेशी जनताको चाहना भन्दै लामो विवरण समेत राखेको छ । युएनपिओको सदस्य (देश) अल्पसंख्यक, गैरमान्यता प्राप्त राज्यका साथै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको रक्षाका लागि एकजुट हुने संस्था हो भनेर उसको परिचयमा दिइएको छ । हुन त यो संस्था संयुक्त राष्टसंघजस्तो शक्तिशाली निकाय हैन तर यसले विश्वको ध्यान भने तान्नसक्छ । उसले आफ्नो परिचयमै भनेको छ– “आज ९० प्रतिशतभन्दा बढी संघर्ष अन्तर राज्यको छ र यसलाई पूर्ति गर्नका लागि युएनपिओ स्थापना गरिएको हो । यसले संघर्षरतहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रदान गर्नेछ । जसबाट सदस्यहरुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन र उनीहरुलाई सहयोग गर्न सकुन् ।”
मधेश पनि त्यस्तै संघर्षरत सदस्य भएको बताउँदै उसले वेभसाइटमा लेखेको छ– “मधेश कुनै समय स्वतन्त्र देश रहेको र नेपालको शासनमा आएको” भ्रम सिर्जना गरेको छ । उसले लेखेको छ “नेपाली शासन अन्तर्गत आएपछि मधेशको उपनिवेशीकरण जारी छ । मधेशी सेनाको विघटनसंगै नेपाली सेनामा सामेल हुने मात्र हैन सार्वजनिक सेवामा समेत रोक लगाइएको छ । नेपाल सरकारले पूरै मधेशमा कैयौं सैनिक पोष्ट स्थापना गर्यो र मधेश भूमि कब्जा गरी आफ्ना नागरिकको बस्ती बसाल्यो । यसबाट मधेशी (स्वदेशी) जनतालाई विस्थापित ग¥यो ।
यस्तो संगठनबाट सिके बाहिरिएर संगठनको नाम परिवर्तन गरे भने उनी पक्कै पनि मूलधारको राजनीतिमा आएको र अखण्ड नेपालप्रति प्रतिबद्ध रहेको विश्वास सबैलाई हुनेछ ।
तर फागुन २४ गते सहमति पछि २६ गते जनकपुर पुगेका राउतको समर्थनमा नारा लगाउनेहरुले “मधेश देश निर्माणका लागि संवैधानिक बाटो खुल्यो, अब जनमतसंग्रह हुन्छ” भन्दै खुसीयाली मनाउनुको कारण । त्यसपछि सिके राउतले भाषणा गर्दै “मधेश कहिल्यै नेपालमा छँदै थिएन र अब जनमतसंग्रहबाट मधेश देश निर्माण गरिन्छ” भने । यो भनाइलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अन्तिम भाषण हो, कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न यसो भनिएको भनेर स्पष्टिकरण दिए ।
फागुन २६ गते जनकपुर पुगेपछि सुके गुमनाम जस्तै भए । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनकपुर र तराईका विभिन्न जिल्ला पुग्दा “राजा आउ देश बचाउँ”को नारा घन्कियो तर सिकेको पक्षमा जनता देखिएनन् । यसबाट पनि सिकेले सिकेको हुनुपर्छ कि उसको लहड वा उसलाई प्रयोग गर्नेहरुको चाहनाले मात्रै नेपाल विखण्डन गर्न सकिंदैन । नत्र उनी अहिले सिंगो तराईमा ‘हिरो’ हुनुपर्ने हो । यसको विपरीत गुमान भएर बस्नुप¥यो ।